मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति | गृहपृष्ठ
Home समाचार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति
मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति
मङ्िसर २७, काठमाडा ंै (अस) । सवं धै ानिक समितिअन्तगर्त को विवाद समाधान उपसमितिले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति जटु ाएका े छ । संिवधानमा देिखएका विवाद समाधान गर्न े उद्दश्े यले मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको बैठकले नयाँ संविधानमा राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारणका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति गरेको हो । नेपाली काङग् स्रे का उपसभापति तथा उपसमिति सदस्य रामचन्द ्र पाडै ले ले जनप्रतिनिधि छान्ने प्रक्रियाका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति भएको जानकारी दिए । ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई समेटेर मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति भए पनि कति प्रतिशत प्रत्यक्ष र कति प्रतिशत समानुपातिक भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन,’ उनले भने । एमाले अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य झलनाथ खनालले दलबीच मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने सहमति भएको र लामो समयदेखि विवादमा रहेको मतदाताको उमेरलाई १८ वर्ष कायम गरिएको जानकारी दिए । एमाओवादीले भने मतदाताको उमरे १६ वर्ष कायम गनर्पु र्न े अडान राख्द ै आएका े थिया े । काङग् स्रे र एमालले गायत अन्य दलल े १८ वषर्म ा जाडे दिदँ ै आएका थिए ।
‘पार्टी नेतृत्वबाटै राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा’
मङ्सिर २७, सिन्धुली (अस) । एमाओवादी केन्द्रीय सचिव सीपी गजुरेलले पार्टी नेतृत्वले आत्मसमर्पणको बाटो अङ्गीकार गरेकाले राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा परेको बताएका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ सिन्धुलीले मङ्गलवार सिन्धुलीमाढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव गजुरेलले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘एमाओवादीको लक्ष्य भनेको शान्ति र संविधान हो । तर, अहिले पार्टी नेतृत्वले लिएको बाटोबाट शान्ति र संविधानलेखन प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणको विषयलाई थाँती राखेर नेतृत्वहरूद्वारा जनमुक्ति सेनालाई पार्टीको निर्णयविपरीत विघटन गरिँदै छ । यो कुनै हालतमा मान्य हदँु नै ।’ सचिव गजरु ले ल े डा. बाबरु ाम भट्टरार्इ नते त्ृ वका े सरकारलाई निरन्तरता दिनुको कुनै अर्थ नरहेको बताए । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका जग्गा कुनै पनि हालतमा फिर्ता नगरिने पनि उनले दोहो¥याए ।
भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार फोरमलाई मान्य
मङ्सिर २७, कैलाली (अस) । मधेशी जनअधिकार (फोरम) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउँदा आफ्नो पार्टीले मान्न सक्ने बताएका छन् । पार्टीको सङ्गठन विस्तार र कार्यकर्ता प्रशिक्षणका क्रममा धनगढी पुगेका अध्यक्ष यादवले मङ्गलवार यस्तो धारणा राखेका हनु्। ‘चारबदँु े नभर्इ सातबदँु े सहमतिका आधारमा भट्टराइर्क ा े नते त्ृ वमा सरकार गठन भएमा फोरम सरकारमा सहभागी हुन सक्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विकल्प नभएकाले मुलुकलाई जोगाउन पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको आवश्यकता भएको उनका े भनाइ थिया े । अध्यक्ष यादवल े माआवे ादी लडाकलू ार्इ मात्र नभई राजनीतिक उद्देश्य लिएर तराईमा सशस्त्र आन्दोलन गरिरहेकालाई पनि वार्ता र सहमति गररे राष्टिय« मलू धारमा ल्याउनपु र्न े बताए । ‘राष्टिय« सरु क्षा नीति अवलम्बन गरी नपे ाली सने ाका े नया ँ सरं चना, उद्दश्े य र आवश्यकताअनुसारको सङ्ख्या कायम नभएसम्म जतिसुकै सङ्ख्या बढाए पनि समस्या समाधान हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
वार्तामा आउन आग्रह
मङ्िसर २७, काठमाडा ंै (अस) । शान्ति तथा पनु निर्म ाणर्् ामन्त्री सत्य पहाडीले सङ्घीय लिम्बूवान राज्य परिषद्लाई बन्दहडताल स्थगित गरी वार्तामा आउन आ≈वान गरेकी छन् । मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्द ै मन्त्री पहाडील े राज्य पनु ःसरं चना आयागे मा प्िरतनिधित्वका े माग गर्द ै मलु कु का े पवू ीर्भ गे मा आन्दाले नमा उत्रिएका े परिषदल् ार्इ वातार्म ा आउन आ≈वान गरेकी हुन् । शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाट समाधान निकाल्न सकिने बताउँदै वार्ताका लागि मन्त्रालय तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘यसअघि पनि परिषद्सँग वार्ताहरू भएका र सहमतिहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइसकिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विज्ञप्तिमा बन्दहडताललगायत विराधे का कायत्र्र mमल े जनतामा नकारात्मक असर पर्न े भएकाले आजैका मितिबाट त्यस्ता कार्यक्रम स्थगित गरी वार्ताको टेबलमा आउन अपील गरिएको छ ।